Shina Potassium Humate sy mpamatsy | Lemandou
Potassium Humate dia sira potasioma avo lenta amin'ny asidra humika nalaina avy amin'ny leonardite avo lenta. Izy io dia an'ny flake mamirapiratra, vovoka ary kristaly mamirapiratra, miaraka amin'ny solubility amin'ny rano avo sy fahaizan'ny rano manohitra mafy. Tsy misy poizina izy io, tsy manimba ary mety amin'ny fambolena maintso ary mety amin'ny fambolena biolojika. Azo ampiharina amin'ny zavamaniry sy ny fambolena, ny hazo fihinam-boa, ny ahitra, ny ahitra ahitra ho an'ny tany sy ny ravina ary ny fanondrahana.
Humate potasioma voadio
Solubility ambony rano
Ny vondrona miasa humic acid amin'ny potasium humate dia afaka mandray sy mitahiry ion-potasioma, misoroka ny fahaverezan'ny rano amin'ny tany fasika sy ny tany mando, ary manakana ny fametahana potasioma amin'ny tanimanga. Ho fanampin'izany, ny faritra sasany amin'ny humate potassium dia asidra humic ambany molekiola toy ny asidra fulvic, izay misy fiantraikany manimba amin'ny silicate, potassium feldspar, ary mineraly hafa. Afaka mihena tsimoramora izy mba hampitomboana ny famoahana potasioma ary hampitombo ny atin'ny potasioma misy. Ny tahan'ny fampiasana zezika potash dia nitombo 87% -95% raha oharina amin'ny zezika potash mahazatra, izay mampitombo ny fahombiazan'ny zezika, ny vokatra ary ny kalitaony. Izy io dia misy fiatraikany manokana amin'ny fampifangaroana ny fampiasana tany sy ny sakafo mahavelona; fandrindrana maharitra sy haingana; effets fihazonana rano sy fihazonana zezika, sns. vokatra manokana, manambatra ny tombony azo amin'ny zezika anorganika sy ny zezika any an-tsaha ary ambony noho izy io, ary manana fifehezana ny famotsorana otrikaina tsara. ny otrikaina amin'ny dingana voalohany dia tsy ho be loatra, ary ny otrikaina dia tsy ho ambany loatra amin'ny dingana manaraka, ary ny fiolahana famolavolana zezika dia milamina. Ny taham-panafahana dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fomba ara-batana, simika ary biotechnolojika ihany koa mba hahatsapana ny fanitsiana roa tonta amin'ny famotsorana haingana sy ny famotsorana maharitra.
Izy io dia azo ampiasaina ho fanitsiana ny tany. Hatsarao ny firafitry ny tany. Ampitomboy ny fahafaha-mifanakalo ion amin'ny tany, manatsara ny fanoherana ny fihenan'ny tany, indrindra mampihena ny masira avo amin'ny tany alkaly. Ampitomboy ny fihinana otrikaina ary ampitombo ny atin'ny humus ao anaty tany. Fisorohana ny fahalotoan'ny tany amin'ny ion-by mavesatra sy ireo zavatra manimba hafa.
Previous: Asidra Fulvika
Manaraka: Humic Acid